Madaxweynaha dalka Filibiin oo ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fadhisanayo | Star FM
Home Caalamka Madaxweynaha dalka Filibiin oo ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fadhisanayo
Madaxweynaha dalka Filibiin oo ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fadhisanayo
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu siyaasadda ka fadhiisan doono.
Waxaa uu sheegay in uusan u tartami doonin xilka madaxweyne ku xigeenka ee doorashooyinka sanadka dambe ee dalkaasi ka dhacayo, madaama dastuurka dalkaasi uu u oggolaaneyn inuu markale isu soo sharraxo xilka madaxweyninimo.
Mr. Duterte ayaa go’aanka uu maanta ku dhawaaqay kusoo aadaya iyadoo kaaliyihiisii hore ee muddada dheer, Senatar Bong Go, uu u gudbiyay musharraxnimadiisa xilka madaxweyne ku xigeenka xarunta guddiga doorashada ee dalkaasi.
Duterte ayaa madaxtinimada dalkaasi qabtay sanadkii 2016-kii, waxa uuna xilka hayay muddo lix sanno ah oo u dastuurka dalkaasi ogolyahay.
Previous articleEedeysanayaal haystay hub oo gacanta lagu dhigay ismaamulka Isiolo
Next articleKenya oo ugu baaqday Itoobiya inay siyaasadeyn gargaarka bani’aadamnimo ee gobolka Tigray